Itoobiya oo Somalia ka saartay khariirad cusub oo ay samaysay | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya oo Somalia ka saartay khariirad cusub oo ay samaysay
Itoobiya oo Somalia ka saartay khariirad cusub oo ay samaysay
Addis Ababa (Berberanews)- Dadka Soomaalida ah ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn uga falceliyay sawir lagu daabacay bogga internet-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, kaasoo muujinaya khariidadda Afrika, iyadoo Soomaaliya lagu daray Itoobiya.
Sawirka muranka dhaliyay, oo ilaa iminka ayna ka hadlin dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa durba laga saaray bogga wasaaradda, kadib markii qeylo dhaan la xidhiidha ay cirka isku shareertay.
Waxaase xusid mudan in khariidadda Soomaaliya ee Itoobiya la raaciyay laga reebay Somaliland.
Arrintan ayaa lagu tilmaamay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka Soomaaliya, waxaana dadka ka fal celiyay ay sheegeen in Itoobiya ay dooneyso wax ay ugu yeedheen “dhul ballaadhsi”.
Hase ahaatee, lama oga in khariidaddan la sameeyay ka hor intii ayna Suudaanta Koonfureed ka go’in Suudaan inteeda kale.
Tan iyo markii sanadkii lasoo dhaafay uu xilka Ra’iisal wasaaraha Itoobiya qabtay Dr Abiy Axmed, waxaa horumar dheeraad ah sameynayay xidhiidhka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxayna labada dal madaxdooda yeesheen shirar badan oo ay uga arrinsanayeen sidii ay horumar wada jir ah u gaadhi lahaayeen.
Arrinta ku saabsan in Soomaaliya iyo Itoobiya la isku daro ayey hadal heynteeda goor hore soo baxday, kadib markii warar la isla dhex marayay ay sheegeen in labada wadan ay mustaqbalka yeelan doonaan 1 baasaboor, inkastoo ayna jirin cid si rasmi ah u sheegtay qodobkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan si wada jir ah u sheegay in dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee labada dal la isu furi doono.
Qoraal lasoo dhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay ku leedahay Internet-ka ayaa lagu xusay in Itoobiya ay hagaajisay xidhiidhkii kala dhaxeeyay waddamo ayna hore isugu wanaagsaneyn tan iyo sanadkii 1991-kii.
Previous article”cadowgu haka naxo Somaliland-na haku faraxdo,”madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Next articleMadaxweynaha Puntland oo safar ugu kicitimay dalka Shiinaha